स्टिभ जब्सका विश्व चर्चित भनाईहरु Popular quotes of Steve Jobs | मेरो कलम
तपाइलाई कोहीबाट प्रस्ताब आयो, “म मोवाईल किनिदिदै छु, कुन कम्पनीको किनिदिउँ ?’ ‘अलि महंगो पर्छ, तर पाए त एप्पलकै चलाउने रहर थियो,’ सायदै तपाईको उत्तर यस्तै हुन्छ होला, हैन ? एप्पलका उत्पादन विश्वका मानिसले रुचाउनु र गुणस्तरिय उत्पादन हुनुको पछाडी Steve Jobs को निकै ठुलो योगदान छ । एप्पलकै कारण अमेरिका धनी बन्दै गईरहेको छ भने विश्वका मानिसको जिवनशैलीमा परिवर्तन ल्याईदिएको छ । कुमारी आमाबाट (फेब्रुअरी २४ सन् १९५५ मा) जन्मेका स्टिभ जब्सले , क्यान्सरको कारण अल्पआयुमै (अक्टोबर ५ सन् २०११ ) संसार छाडेका थिए । स्टिभ जब्ससगँ दुई वर्षको अवधिमा ४० भन्दा वढी अन्तवार्ता लिएर त्यस्तै एक सयभन्दा वढी परिवारका सदस्यहरु, साथीहरु, विज्ञापक, प्रतिस्पर्धीहरुसगँ उनका वारेमा सोधेर पत्रकार वाल्टर ईसाक्सनले ‘स्टिभ जव्स’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । यो पुस्तक विश्व चर्चित भईसकेको छ । अच्युत कोईरालाले पनी यो पुस्तक नेपालीमा अनुवादमा गरेका छन् । सोहि किताववाट उनका विश्व चर्चित भनाईहरु यहाँ साभार गरिएको छ ।
~ कहिलेकाहीँ जव तपाईले नयाँ अविष्कार गर्नुहुन्छ त्यतिवेला तपाईले गल्ति पनी गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो वेला सबैभन्दा राम्रो चिज त्यसलाई स्विकार गर्नु हो र मसयसगै त्यस अविष्कारलाई सुधार गर्दै लैजानु हो ।
~ चिहानमा सवैभन्दा धनी व्यक्तिका रुपमा मर्नु मलाई रुचि छैन । मलाई ओछ्यानमा सबैभन्दा राम्रो दिन बिताएँ भन्दै सन्तुष्ट भएर जानुमा रुचि छ ।
~ म २३ वर्षको हुदा मेरो मुल्य १० लाख डलर थियो । २४ वर्षको हुदा १ करोड डलरको अनि जसै २५ वर्षको पुगेँ १० करोड मुल्यको भएँ तर मेला लागि यो त्यति महत्वको थिएन किनभने मैले कहिल्य पनि पैसाका लागि काम गरिनँ ।
~ यदि युवावस्थामा बिल गेट्सले गाजाँ खाएका हुँदा हुन त भारतका आश्रमहरुमा डुलेका हुन् त बिल गेट्स्को दृष्टि अझ व्यापक हुन्थ्यो ।
~ अविष्कार र सिर्जनशिलताले नै नेता र कार्यकर्ताबीचको फरक छुटाईदिन्छ ।
~ जसै मलाई नयाँ सोच आउछँ, यस्तो सोचका बारेमा वपपिरिका मानिसहरु के सोच्दछन् , बेग्लै कम्पनी बा बेग्लै तरिकाका मासिहरु यसका वारेमा सोच्छन्, के कुरा गर्छन , के वादविवाद गर्छन भन्ने वुझ्नु हुन्छ र यी कुरा म सयौँ मानिसहरुसगँ सोध्छु, वुझ्छु र चुपचाप बुझिरहेको हुन्छ । यसो गर्नुको उदेश्य विचारको सम्भावना अध्ययन गर्नु नै हो ।
~ जसै म कुनै व्यक्तिलाई एप्पलमा नियुक्त गर्छु , त्यसका लागि ऊ साँच्चिकै योग्य त हुनुपर्छ नै , उनीहरु स्मार्ट पनी हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पनि मेरो चासो चाहिँ उनीहरु एप्पल कम्पनीसगँ प्रेममा फँस्छन कि फँस्दैनन भन्ने हुन्छ । किनभने, यदि उनीहरु एप्पलसगँ प्रेममा परे भने अन्य कुराहरु आफैँ मिल्दै जान्छ । उनीहरुले त्यसपछि एप्पलको सबैभन्दा राम्रो हित केमा हुन्छ भन्ने चासो राखिहाल्छन् र आफ्नो हितलाई पुछारमा राख्छन् । यस्ता मानिसले स्टिभ जब्सको हित सबैभन्दा राम्रो केमा हुन्छ वा अन्यको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिइहाल्छन् ।
~ तपाईको समय सीमित छ , त्यसैले अरुको जीवनका इच्छा बाँचेर आफ्नो जीवन बर्बाद नगर्नुहोस् । कुनै विचार विशेषमा तपाई नफँस्नुस्, जसले अरुकै विचार व्यक्त गर्दछ । अन्तरहृदयले सहज तरिकाले अभिव्यक्त गर्न नसकिने विचारमा तपाई नअल्झिनुस् । महत्वपुर्ण कुरा त तपाईले अन्तरहृदय र मुटुले अभिव्यक्त गरेको कुरालाई पछ्याउने साहस गर्नुहोस् । अन्तरह्दयलाई तपाई के बन्नुहुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा भईसकेको हुन्छ । त्यसैले अन्य बाँकी सवै कुराहरु दोश्रो दर्जाका हुन् ।
~ हामी जे काम गर्दैनौ, त्यसमा जति गर्व गर्छौ त्यति नै जे गर्छौ यति त्यसमा गर्व गर्छौ ।
~ सिर्जनशील काम हजार कुराहरु अस्वीकार गरेपछि र गलत बाटोमा नजाने कैयौँ प्रयासपछि नै हुन्छ ।
~ ३० र ४० वर्षको अधवैशैहरुले साँच्चिकै गज्जबको कुरामा योगदान दिएको विरलै फेला पर्न सक्नुहुन्छ ।
~ सिर्जनशीलता गाँसिएर आउने कुरा हो । तपाई कुनै सिर्जनशील मानिसलाई सोध्नुस्, यस्तो सिर्जनशील चिज कसरी सोध्नुभयो ? उनीहरु त्यो बेला ज्यादै दोषी अनुभुती गर्छन किनभने उनीहरुले वनाएका हुदैनन । त्यो त पहिले नै देखिसकेको हुन्छन् । त्यो कुराको अनुभवहरुलाई गाँसेर उनीहरुले नयाँ चिज वनाएका हुन्छन् ।
~ डिजाईन एउटा हाँसउठ्दो शव्द हो । केही मानिसहरु जस्तो देखिन्छ, त्यही डिजाईन हो भन्ने सोच्दछ तर यसलाई भित्री रुपमा निखन्दै जाने हो भने यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा नै डिजाईन बन्न पुग्छ ।
~ मलाई धेरैले धेरै पटक सोधेका छन्, एप्पलका ग्राहकहरु किन कम्पनी वा प्रडक्ट प्रति धेरै झुकाव राख्छन् । म्याकिन्टोस् चर्चका सदस्य भएकाले त्यस्तो भएको होईन । यो साह्रै हासँ उठ्दो कुरा हो ।
~ म दुःखी छु, सत्य त्यही हो । बच्चा जन्मनुले तपाईको दृष्टिकोणमा निकै फरक ल्याईदिन्छ । हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याईदिन्छ । हामी जन्मन्छौ थोरै समयका लागी हामी यहाँ बाँच्छाँै र मछौँ । यो निकै लामो समयदेखी भइरहेको छ । बरु यसको तुलनामा प्रविधि उति धेरै परिवर्तन भएको छैन ।
~ यी प्रविधिले मानिसको जीवनलाई सहज वनाईदिन सक्छ, सम्पर्कमा नभएकाहरुलाई पनि नजिक ल्याउँछ । प्रविधिले नै जन्मेका समस्या भएको बच्चालाई उसका बाउआमा र सहयोगी समुहवीच सहज वनाईदिन सक्छ । औषधीय सुचना दिन सक्छ, नयाँ प्रयोगिक औषधी उपयोगी गर्ने सुचना दिन सक्छ । यी कुराले हाम्रो जीवनमा सशक्त भुमिका खेल्छन् । प्रविधिलाई मैले कम आँकेको छैन ।
~ हामीले बगाउने हरेक पसिनाको मुल्य हाम्रा ग्राहकहरुले तिर्छन । हामीले ध्यान दिने स साना कुराहरुका कारण उनीहरुलाई कम्प्युटर चलाउन सहज हुन्छ । र, यो कुरामा हामी साँच्चिकै उम्दा छौ ।~ साँच्चिकै हाम्रो सोचलाई कार्य रुपमा बदल्न र नयाँ प्रविधिलाई एउटा ठुलो कम्पनीका रुपमा निरन्तरता दिन र कैयौँ वर्षसम्म नयाँनयाँ अविष्कार गरिरहनका लागि निकै ठुलो अनुशासन चाहिन्छ ।
~ हामी जे गर्छौ, त्यो हामी आफैँ त्यसलाई जान्न ज्यादै ईच्छुक हुन्छौँ ।
~ जब तपाई साने हुनुहुन्छ , टीभीमा देखिएका कतिपय कुराप्रति तपाईलाई षडयन्त्र भएको महसूस हून्छ । टीभी चलाउने नेटवर्कहरुले हामीलाई मूर्ख बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् भन्नु हुन्छ । तर तपाई जसै बुढो हुदै जानुहुन्छ त्यो सत्य होईन भन्ने महसुस हुन थाल्छ । ती टिभी नेटवर्कहरुले व्यापार गरिरहेका छन् र ग्राहकहरुले के चाहन्छन्, त्यही दिएका हुन्छन् ।
* स्टिभ जब्सले यी चर्चित भनाईहरु विभिन्न मिडियाहरुमा बोलेका थिए ।
उनले वोलेका यी कुरा र व्यवहारमा कत्तिको मिल्दोजुल्दो छ त ? उनले एप्पलको लागी गरेको योगदानमा आधारित चलचित्र पाईरेट्स अफ सिलिकन भ्याली (pirates of silicon valley) हेर्न सक्नुहुन्छ । युट्युवमा भेटिएका केहि क्लिपहरु यहाँ राखेको छु ।